LAHATSARY: Herisetran’ny Polisy Libaney Tamin’ireo Mpanao Fihetsiketsehana “Maimbo Ianareo (You Stink)” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2015 8:02 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, 繁體中文, 简体中文, English
Beirut, Libanona. 23 Aogositra 2015 — Lehilahy iray mitsangana eo akaikin'ny fefy tariby may tao amin'ny kianjan'ny Riad el Solh ao Beirota, Libanona taorian'ny nandefasana ny tafika handrava ny mpanao fihetsiketsehana “mamibo ianareo” nanomboka nanala ny fefy tariby mizotra mankany amin'ny Grand Seraii, foibe toeran'ny governemanta Libaney. Sary avy amin'i Issam Abdallah. Copyright: Demotix
Mitohy ny hetsi-panoherana ao Libanona rehefa nidina teny an-dalamben'i Beirota ny olona an'arivony mba hanohitra nandritra ny faran'ny herinandro ny fivangongon'ny fako . Nitangorona tao amin'ny kianjan'ny Riad El Solh ireo mpanao fihetsiketsehana mpihiaka ny “Maimbo Ianareo” tany am-boalohany, izay nitakian'izy ireo “vahaolana maharitra amin'ny fanesorana fako ao Libanona.”
Mety ho hetsika fanoherana ny fivangongon'ny fako no nanombohany. Ankehitriny mahatonga fandrahonana ny governemanta sy mitaky ny fametraham-pialana, ny fampitsaharana ny kolikoly ary ny fifidianana parlemantera vaovao ny fofona masiso. Tsy nanana Filoha nandritra ny herintaona i Libanona, izay efa miaritra faharatsian'ny fotodrafitrasa sy ny fahatapahan'ny herinaratra isan'andro. Tamin'ny taona 2009, nitarin'ny antenimiera hatramin'ny taona 2017 ny fe-potoam-piasany, tsy misy ny fifidianana, lazaina fa noho ny korontana no antony. Ankehitriny, mitaky fanovana amin'izany rehetra izany ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsy olan'ny fako intsony izany izy ity.
Ny fihetsiketsehana nanomboka tamin'ny Asabotsy (22 Aogositra) no anisan'ny goavana indrindra tamin'ireo andiam-pihetsiketsehana tsy nitsaha-nitombo sy nihamafy hatramin'ny nanombohan'ny Tol3et Re7atkom (maimbo ianareo), hetsika tsy ara-pivavahana mitaky vahaolana amin'ny fivangongon'ny fako ao Libanona. Tamin'ny 17 Jolay, nakatona ny toerana lehibe indrindra fanariam-pako ao amin'ny firenena ary nanomboka nivangongo manerana an'i Beirota ny fako satria tsy voasahan'ny manampahefana araka ny tokony ho izy ny olan'ny fako.
Vakio ihany koa: Inona no Nitranga Tamin'ny Asabotsy 22 Aogositra
Nanomboka tamin'izay, nijapy lamasinina ihany koa ireo vondrona hafa, samy manana ny fandaharan'asany [kinendriny]. Miaraka amin'ny Hetsika Mivantana Tsy misy Herisetra, Non-Violent Direct Action (NVDA), ny hetsika Maimbo Ianareo, misy ireo lahatsary avy ao Libanona mampiseho ireo mpanao fihetsiketsehana notafihan'ny mpitandro ny filaminana tamin-kerisetra, izay mampiasa baomba mandatsa-dranomaso sy tafondron-drano, ary mitifitra mivantana ireo vahoaka.
Namoaka voalohany ny zava-nitranga tamin'ny 22 Aogositra i Joey Ayoub, bilaogera Libaney sady mpanoratra ato amin'ny Global Voices Online amin'ny teny Libanona, mitantara ny fomba nihamafisan'ny toe-draharaha tao amin'ny bilaoginy Hummus for Thought izy. Hoy i Ayoub nanazava:
Niaraka tamin'ireo olom-pirenena Libaney an'arivony mitaky ny zonay aho raha niharan'ny herisetran'ny polisy, baomba mandatsa-dranomaso, tafondron-drano sy jiolahimboto mitam-piadiana manaraka ireo mpanao fihetsiketsehana milamina ary midaroka azy ireo
Satria anisan'ireo nanampy tamin'ny fikarakarana ity fihetsiketsehana ity ny tenako, afaka milaza soa aman-tsara aminareo aho fa tafahoatra tsy araka ny niheveranay azy ny fihetsiky ny governemanta. Nihevitra izahay fa tafondron-drano tahaka ny farany no ho ampiasan'izy ireo, ary maro taminay no nivonona tamin'izany (mametraka ny findainay ao anaty harona plastika sns). Tsy nivonona tamin'ny baomba mandatsa-dranomaso izahay ary tsy nihevitra mihitsy fa hahita polisy mpandrava korontana sy olon'ny tafika manao ny asan'ny governemanta jiolahimboto.
Tohina tanteraka izahay noho ny habibiann'ny polisy misahana ny rotaka sy ireo lehilahin'ny tafika nitifitra baomba mandatsa-dranomaso tampoka any amin'izay bebe olona. Nahita vavy antitra sy ankizy nobatain'ny lehilahy izahay mba hovonjena tsy ho voahitsakitsaky ny olona . Niantsoantso izahay hoe “misy zazakely ato! Misy zazakely ato!!” raha nanamafy ny hafaingam-pandehan'ny tafondron-drano ny polisy mandram-pianjeranay. Nanosika olona efa ho 10.000 tao anaty arabe iray hafa tery kely ny tafondron-drano. Voatsindry tao ireo ankizy nanaraka ny ray aman-dreniny, niantsoantso ireo vavy antitra hoe ‘mahamenatra! mahamenatra! ‘raha niezaka nandositra izy ireo, nanangana rindrin'ny firaisankina ireo tanora lehilahy sy vehivavy mba hisorohana ny herisetran'ny tafondron-drano tsy hipaka any amin'ireo olona malemy kokoa niaraka taminay.
Manontany i Ayoub hoe:
Tena nampidi-doza tokoa izany. Natahotra mafy ny ainay izahay. Noho ny amin'inona? Mitaky vahaolana maharitra amin'ny olan'ny fako ao Libanona mifanohitra amin'ny tsy fahaiza-mitantana mampidi-doza ankehitriny? Maniry ny hiaina fiainana ara-dalàna lavitry ny kolikoly sy ny kiantranoantrano ara-pivavahanamanempotra?
Indreto lahatsary sasany mampiseho ny herisetran'ny polisy tamin'ireo sivily:
Rehefa avy niventso “Fihetsiketsehana milamina ity” voadaroky ny mpitandro ny filaminana ireo sivily.
Mampiseho baomba mandatsa-dranomaso natifitra mivantana teny amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ity lahatsary ity:
Voalaza fa mampiseho ireo polisy miezaka maka an-keriny sy midaroka vehivavy kosa ity lahatsary ity:
Miezaka manaparitaka ireo mpanao fihetsiketsehana ao Beirota kosa ny polisy:
Miezaka manaparitaka ireo mpanao fihetsiketsehana #YouStink ao Beirut ny polisy
Natifitra teny amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny baomba mandatsa-dranomaso:
Baomba mandatsa-dranomaso nalefa teny amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Mariky ny fanjakana tsy nahomby!
Miaramila midaroka mpanao fihetsiketsehana milamina:
Lahatsary ahitana miaramila midaroka mpanao fihetsiketsehana milamina. AELEZO AZAFADY. MBOLA MISY SARY HAFA HOAVY.
Etona mandatsa-dranomaso natifitra ny mpanao fihetsiketsehana natao tao an-tsenan'i Beirota:
Mpanao fihetsiketsehana, sivily voafandrika sy voatifitra etona mandatsa-dranomaso alefan'ny polisy ANATY tsena
Dia ahoana koa ny manaraka? Mbola hanohy ny fihetsiketsehana ve ny vahoaka Libaney rahampitso rahafakampitso? Aza miala hahitana ny tatitra bebe kokoa.
‘Maimbo ianareo’ Mpanao fihetsiketsehana mitaky ny hialan'ny governemanta [fr]
Nampitandrina ny fikasan'ny antoko politika hanararaotra ny hetsika ataon-dry zareo ny Libaney mpikatroka [mg]
Mpanao fihetsiketsehana miatrika ny gidragidran'ny polisy misahana ny rotaka ao Libanona [mg]
Ary ny tati-baovaonay ao amin'ny Global Voices Checkdesk